IISOKISI EZILI-12 EZIBALASELEYO ZAMADODA NGO-2021 - UHLOBO
Iisokisi ezili-12 eziBalaseleyo zamadoda ngo-2021
Xa ungumntwana, awusoze wabuxabisa ngokupheleleyo ubungangamsha beesokisi eziqinileyo. Nokuba ziisokisi zamaqatha, iikawusi zamathole, okanye iisokisi ezingabonisi, ukuba nenani leekawusi ezisemgangathweni kuyimfuneko kwintuthuzelo yemihla ngemihla kunye nokusebenza. Ngelixa abafazi banokuhlala bebaleka ngezihlangu ezivulekileyo okanye izihlangu ezingafunekiyo, ezinye izihlangu zamadoda ngaphandle kweeflip flops zifuna ukusetyenziswa kweekawusi.
Akukho nto imbi ngaphezu kwevumba elibi okanye ukukhuhla okungafunekiyo kunye namadyungudyungu ngenxa yokungabi nalukhuseleko xa unxibe nantoni na ukusuka kwizihlangu ezisesikweni ukuya kwiiteki. Ukongeza ekunikezeleni umsebenzi wepremiyamu kunye nentuthuzelo, ukuba neentlobo ezifanelekileyo zeekawusi kunokukunceda ukuba uhlale unemfashini kunye nesitayile, nkqu neendlela ezifihlakeleyo.
Kuba umhle kakhulu wonke umntu unokuhlala esebenzisa iperi yeekawusi, ayisiyonto imbi ukuqala ukongeza kwi-wardrobe yakho, ngakumbi ngaphambi kokuba kubanda kwimozulu yasebusika. Ukukunceda unciphise ukhetho lwakho, nolu uluhlu lwethu Iikawusi ezili-12 ezilungileyo zamadoda ngo-2021.
1. Iikawusi zePantherella Thornham Ribbed
Iisokisi zePantherella Thornham Ribbed lukhetho olukhulu kwabo banesitayile se-quirky kodwa esilula. Elona candelo lilungileyo kwezi kawusi yinto yokuba ufumana izibini ezibini ngolandelelwano olunye, kwaye nangona umzimba ophambili wazo zombini ungumbala omdaka, iziphelo ezimibalabala zongeza ukujija okungafaniyo okubabeka bucala ngaphandle kweyona kawusi isisiseko .
Ngoncedo lwegcisa elenza iikawusi uScott-Nichol, uPantherella wenze iikawusi ezikhululekileyo kodwa ezinobungqingili. Ukubunjwa kwabo kuxutywe kunye nabo benziwe nge-28% yoboya be-merino, i-viscose engama-28%, i-28% yenayiloni, i-14% yesilika kunye ne-2% ye-lycra. Isithende esiqinisiweyo kunye ne-cuff eklinikhi inika ezi kawusi zilukiweyo imilo efanelekileyo kwaye iqinisekisa ukulunga okuhle.
2. Iisokethi ze-Elder Statesman Hot Hot Yosemite Tie-Dye Cashmere
Akunakuphikwa ukuba idayi-yedayi ibuye kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ukusuka kwii-sweatshirts ukuya kwizihlangu, awungekhe uhambe kakubi ngesiqwenga sedayi. Ngelixa iikawusi zisenokungabi yinto yokuqala ocinga ngayo xa uzama ukunyusa isimbo sakho, la Masokisi ama-Eldermen Hot Hot Yosemite Tie-Dye Cashmere enza ukuba kube lula. Iikawusi ziwela ngakumbi kwicala elilula, nangona ipateni yedayi yokubopha yanele ukwenza ingxelo.
Isiteyitimenti saMdala eshushu I-Yosemite Tie-Dye Cashmere iisokisi zikwafumaneka ngemibala eyahlukeneyo enje ngemhlophe, luhlaza, luhlaza, nepinki, okuthetha ukuba ungongeza ngokulula umbala wombala nakwezona ziphantsi. Ngaphezulu koko, ezi kawusi zenziwe nge-100% ye-cashmere, ibanika elona nqanaba liphezulu lokuthamba kunye nentuthuzelo.
3. ILock Sock Inkampani iikawusi nje zoShutyana
Inkampani ebomvu yaseLondon Sock Sockorial nje lulongezo oluhle nakweyiphi na imbadada. Iphefumlelwe yiLaSile Row eyaziwayo yaseLondon, ezi kawusi zivela zombini zasebukhosini kunye neziklasikhi, zibanika inkangeleko ethile yokuba amadoda azo zonke iintlobo ezahlukileyo aya kuwazisa.
Iikawusi zenziwe ukusuka kwi-jersey yomxube ophakathi kobunzima obuphakathi nobunzima obunobumba obuthambileyo bokufunxa ngokwaneleyo kunye nokuthamba. Isole eqinisiweyo ikongeza nakumgangatho ongaphezulu ngokwamava ngelixa unxibe zona, nokuba lolusuku lude. Kwaye awunako ukubukhanyela ubumenyemenye be-logo yomnyama etyikityiweyo phezulu kwecuff.
4. Iikawusi zeNike Dri-Fit zoQeqesho lweKotoni
Ukuba ukhangele ezona sokisi zisisiseko zingazukufumana umsebenzi kuphela kodwa zikwanceda nakweyiphi na into yeembaleki okanye intshukumo enkulu, iikawusi zeNike Dri-Fit Training Cotton Crew zilungile kangangoko unokufumana. Ifumaneka kwimixube eyahlukeneyo eli-12 yemibala, ezi kawusi zibonelela ngomqolo owongezelelweyo kwiimbaleki nakumadoda asebenzayo abeka isixa esifanelekileyo kuxinzelelo ezinyaweni zawo.
Ukongeza, ibhendi ye-arch ijikeleza unyawo ukuze ilunge kwaye ivale ngaphakathi ukuze kuthintele unyawo lwakho ekutyibilikeni okanye ekuthambiseni umqhaphu. Eyona nto ibaluleke kakhulu, itekhnoloji yokususa ukubila ithintela ukufuma ekuqokelelekeni kwaye kubangele ukungonwabi.
5. Iikawusi ze-Sunspel Ribbed Cashmere
Kulabo bafuna iisokisi ezicocekileyo kunye nezisisiseko, iisokisi ze-Sunspel's Ribbed Cashmere zonke ezo zinto kunye nokunye. Besebenzisa ikhesmere ethambileyo engenakulinganiswa nanto, zinithiwe e-Itali ukusuka kwezona zintle izixhobo. Ngaphezulu koko, ii-cuffs ze-elastic kunye neepaneli ezichaziweyo kwisithende kunye neenzwane zenza i-snug fit kunye ne-ergonomic finish. Zikwakhona ngemibala emine eyahlukeneyo yomkhosi waselwandle, omdaka, ngwevu, nomhlophe.
6.LL Bean Merino Wool Ragg Socks
I-LL Bean Merino Wool Ragg Socks yile nto uyifunayo kwiinyanga zasebusika xa iqala ukubanda. Zifumaneka ngemibala eyahlukeneyo ehlekisayo kunye nemibala eyonwabisayo kwaye zenziwe ngokudityaniswa koboya be-merino engama-77%, i-21% yokwolula inayiloni, kunye ne-2% ye-Lycra elastane, ukudala ukuvumelana okugqibeleleyo kokugquma kunye nobushushu.
iinwele ezinde zobuchwephesha zamadoda
Eyona nto ibaluleke kakhulu, uboya be-merino abunasondo, into ebaluleke ngokumangalisayo xa ujongene noboya. Inayiloni kunye nokunwebeka okwandayo kuvumela ezi sokisi zishinyeneyo ukuba zomelele ngalo lonke ixesha zinezolulo olongezelelekileyo lokuthuthuzela.
Bona ngakumbi malunga - Iikawusi ezili-10 ezilungileyo zeMerino Wool yamadoda
7. Bombas Space Idayi Idayi Sock
Ngenkomo yedayi yeSokisi yedayi, uBomba usebenzisa ubuchule obunomdla obangela ukubonakala kwesitayile. Ngokusetyenziswa kweDayi yendawo, imibala emininzi idayiwe kumtya omnye wentambo. Oku kudala ubume obumangalisayo kunye nephethini engafezekanga efanelekileyo kunye nenhle. Iikawusi zikwanentuthuzelo entsonkothileyo eqinisekileyo yokwenza ukuba le ibe yenye yeendawo zakho ozithandayo ukuya kuzo zonke iisokisi.
8. UPaul Smith Intarsia-Stripe Iikawusi zekotoni eMercerised
Iikawusi zikaPaul Smith Intarsia-Stripe Mercerised Cotton zombini ziyadlala kwaye zintle. Nangona ubukhulu becala benombala we-navy ngombala, imivimbo enemibala yongeza isandi esimnandi esenza iikawusi zibe ngaphezulu kakhulu kweesoksi ezilula ze-navy.
Yenziwe e-Italiyane isuka kwijezi yokudibanisa umqhaphu, iikawusi zikaPaul Smith Intarsia-Stripe Mercerised Cotton zinesiphatho egudileyo kwaye zigqityiwe ngamaqatha anqabileyo avumela iikawusi ukuba zihlale zingabonakali ngaphakathi kwezihlangu zakho. Ibhokisi yeenzwane eqinisiweyo ibonelela ngenduduzo eyongeziweyo edla ngokufunwa kwiikawusi ezingabonisi.
9. Iikawusi zeFrank kunye ne-Oak zeThole
Ukuba usemarikeni wento elula, ecekethekileyo, kwaye ephefumlayo, jikela ingqalelo yakho kwiikawusi zeFrank kunye ne-Oak Calf-Length. Ezi kawusi zinde zethole zimnyama zenziwe ngePolyester ePholileyo ukuze kuqinisekiswe ukuba iinyawo zakho ziyakwazi ukuphefumla kwaye zikhululekile ukufuthaniseleka okanye ukufudumeza ngalo lonke ixesha. Akukho nto imbi ngaphezu kokuba iinyawo zakho ziziva ngathi zibanjelwe kwigumbi elishushu, yiyo loo nto iisokisi zikaFrank kunye ne-Oak Calf-Length zilungile kwiintsuku ezinde, ezishushu kwizihlangu ezivaliweyo.
10. Iikawusi ezixutywe iMissoni enemigca yeCotton
Iikawusi eziMdaka eziMdaka zikaMissoni eziMdaka lukhetho oluhlekisayo, olunemibala emininzi olwenziwe ngobuchule bokudaya indawo obunombala wentambo nganye kwiikawusi. Izinto ezithambileyo zomxube womqhaphu ezenza ukuba kube lula ukunxitywa ngelixa iibhokhwe ezinemithambo ziqinisekisa ukulingana okuqinileyo kodwa okuguqukayo. Ngapha koko, iklasikhi emhlophe, emhlophe yeMissoni yongeza ukubamba okufihlakeleyo kodwa okuhle okubonisa umgangatho kunye nenqanaba leprimiyamu yezi zihlangu.
Ngenxa yobunqabileyo bomsonto, ezi sokisi zezona zigcinelwe ukuhlanjwa kwezandla kunye nokomiswa. Kwicala lokudibanisa, awuyi kuba nexhala malunga neekawusi zakho ngokungummangaliso ezilahlekileyo kumatshini wokuhlamba.
11. Iikawusi eziPhezulu zeGucci GG
Kulabo bathanda ukujika iintloko kunye nezona zinto zilula, iiSokisi eziPhezulu zeGucci GG kunokuba yinto efanelekileyo ekuthengeni. Umzimba ophambili weekawusi uhonjiswe ngophawu lwe-GG olusayinileyo olwenzile iGucci ukuba ibe ligama lasekhaya eliyimbonakalo, ngelixa umbala ohlaza kunye nobomvu wendabuko uthungelwe kumgca ocekeceke ngaphezulu komphezulu onembambo.
Ezi kawusi yindlela elungileyo kwaye kulula yokuphosa ukujija kwefashoni kwinto enye esisiseko. Ziyilwe e-Itali ukusuka kwezona zithambileyo zekotoni, kwaye nangona ziguquguqukayo, zibonelela ngokulungeleleneyo okukhuselekileyo okuya kuthintela nakuphi na ukurabha okanye iblister ekhathazayo.
12. Iikawusi zePolo Ralph Lauren Liner
Ukuba ukwiimarike zezinye iikawusi ezingabonisiyo, iiPokisi zePaul Ralph Lauren zilawula ukuba zikhohlise ngokupheleleyo ngelixa zisenza ingxelo. Ezi sokisi ze-beige zilula kwaye zilula azibonisi zipakethe zintathu, oko kuthetha ukuba uya kuba nokusetyenziswa okuninzi kokugcina phakathi kokuhlamba.
Iikawusi zikwabonisa i-jacquard yelebheli ye-Pony logo, eyaqala ukubonakala ngo-1974. Yenziwe ngomxube othambileyo, ofunxayo womqhaphu, iikawusi zePolo Ralph Lauren Liner zilula kakhulu kwaye kulula ukuzinxiba imini yonke. Iikawusi zikwanoluli, kwaye ziyaziwa ukuba zinomlo ongaqinisiyo othintela ukufuthanisela.
Bona ngakumbi malunga - Iisokisi ezili-10 eziBalaseleyo zeQatha kumaDoda ngo-2021
unxiba njani ijini emhlophe madoda
iibhokisi zeebhondi ezinenwele zendalo kuphela
Iingcamango ze tattoo kwimikhono yabasetyhini
imifanekiso yakhe kunye neye tattoos
izimvo ezingabizi mva kwendlu akukho ngca